E-Learning: Microsoft Office Skills
Course categories: Career SkillsMechanical Design SoftwareLanguageCivil SoftwareMicrosoft Office SkillsSteel Structure SoftwareAutodesk RevitEngineering ManagementPlant EngineeringBIMAnalysis SoftwareArchitecture SoftwareBIM
Microsoft Outlook တို့ကို အထူးပြု သင်ကြားသော အတန်းများကို ဖွင့်လှစ်နေပါပြီ။
Microsoft Excel 2016 ဆိုတာ MS Office 2016 suite ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ spreadsheet application တစ်ခုပါ။ Excel 2016 online course ကို တက်ရောက်ရင်း data တွေကို ဘယ်လို organize လုပ်ရတယ်၊ calculate လုပ်ရတယ်ဆိုတာကို လေ့လာကြရအောင်...။
Microsoft Excel Basic and Advanced Course with Sayar Thura Htet Naung
Teacher: Thuya Htet Naung
Microsoft Access Basic Training Course
Database ရေးလိုသူများ၊ မိမိ၏ အလုပ်များမှာ Excel တစ်ခုတည်းကို သုံးရုံနှင့် မနိုင်မနင်းဖြစ်နေသူများ အဓိက တက်နိုင်ရန် စနေ၊တနင်္ဂနွေနှင့် ရုံးချိန်လွတ် အတန်းများဖွင်ပေ့းနေပါပြီ။
Project တစ်ခုကို အနည်းဆုံး အစအဆုံးရေးနိုင်အောင် သင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး Table, Query,Form, Report လေးမျိုးအပြင် Visual Basic for Application(VBA) အခြေခံပါ သင်ကြားပေးပါမည်။
EduGate Training Center တွင် လက်ရှိသင်ကြားနေသူ(သို့)တက်ရောက်ခဲ့သူ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများကိုတော့ 20% Discount ပေးပါပါမည်။
Online မှ လေ့လာလိုပါကလည်း ရနိုင်ပါတယ်။
EduGate Training Center
E-learning Developer and Freelancer
No.96,1st Floor, Hlae Dan Street, Lanmadaw Tsp
Postal Code: 11131
Contact No. 09422 540 237, 09263 281 989
I wanted to know more about excel
Excel Macro Course
Excel Micro Class ကို Advanced Excel ပြီးသည့် ကျောင်းသားများသာ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Teacher: Ko Andrew
Microsoft Excel Basic&Advanced Course
Microsoft Excel - Basic & Advanced သင်တန်း
သင်တန်းတက်ရောက်မည့်သူများအတွက် သိသင့်သော အချက်များ
Course Fee: 50000Kyats Skill Level: Beginner Certificate: Yes
Overview :Excel သင်တန်းကို Beginner Level မှ Expert Level အထိ တတ်မြောက်လိုပါသလား?
ယခုဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေတဲ့ အတန်းဟာ Beginner, Intermediate, Advanced Level တွေမှာ သင်တဲ့ သင်ခန်းစာများအားလုံး ပါဝင်ပြီး ကွန်ပျူတာအခြေခံ ရှိသူတိုင်း တက်ရောက်နိုင်တဲ့ အတန်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းချိန် (၃၂) နာရီ အတွင်းမှာ Math, Statistical, Logic, Text Functions တွေကို ဘယ်လို အသုံးပြု ရမလဲဆိုတာ၊ သင့်လုပ်ငန်းထဲမှ အချက်အလက်(Data)များကို ဘယ်လို Sorting & Filtering လုပ်ရမယ်ဆို တာ၊ ဒီအချက်အလက်(Data)များကို Pivot Table & Pivot Chart များမှာ ဘယ်လို ထည့်သွင်းပြီး အကျိုးရှိစွာ ထည့်သွင်းမလဲဆိုတာမျိုးတွေ ပါဝင်တဲ့ အခြေခံ နည်းစနစ်တွေ အားလုံးကို သင်ကြားရပါမယ်။
Excel ကို လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းသင်ခန်းစာများအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီ Excel Class က သင့်ကို Excel Ninja တစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် လမ်းကြောင်းပေါ် တင်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ အာမခံပါရစေ။
ယခု Excel Class မှာ သင်ကြားမယ့် Verionက 2016 ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကို ရန်ကုန်လာမတက်နိုင်လို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား။
နယ်(သို့)နိုင်ငံခြားမှ တက်ရောက်လိုသူများအနေနှင့် www.elearning-myanmar.comမှာ Online Class အနေနှင့် တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။ သင်ကြားမယ့် ပုံစံကတော့ Virtural Classroom ပုံစံ ဖွဲ့စည်းထားပြီး Step-by-step Video Files, PDF,JPEG,Excel Files များကို ထည့်သွင်းပြီး Assignment File များထည့်သွင်းကာ သင် ကြားနေပါတယ်။
MS Excel 2016B
Steel Structure Software